Trafikana harena an-kibon’ny tany Vato 1,781 taonina sarona tany amin’ny RN2
Vato indostrialy milanja 1,781taonina no saron’ny Zandary avy amin’ny Kaompanie Imerina Centrale nanao sakana tao Ambatolaona Manjakandriana PK 58 tamin’iny RN2 iny ny alatsinainy 27 desambra tamin’ny 5ora maraina.
Vato karazany 3 nahitana Agathes, Qauartz rose, ary Cristal ireo. Avy any Nosy Varika nandalo tany Mahanoro saika hoentina antsokosoko tamin’ny alalana fiara sprinter fourgon, notsindriana apombo tamin’ny gony izy io. Tsy nisy taratasy, ka nosamborina avy hatrany ny olona roa dia ny mpamily sy ny tompony nandeha tamin’ilay fiara. Ny volana septambra no nahatratarana vato 500kg tsy nisy taratasy tamin’ny làlam-pirenena fahaefatra, ary izao mitohy izao. Nandritra ny fisavana dia nolazain'ny mpamily fa apombo no nentiny. Notsirihin'ireo zandary tsara ny tao anaty fiara ka indro fa sarona ireo vato nafenina tao anaty gonin'apombo miisa 56. Misy fehezan-dalàna arahana ny fitrandrahana sy et fihariana vato eto Madagasikara, na vato soa na vato indostrialy. Voafaritra ao anati'ireto lalàna ireto:- art 169 alinéa 5 de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005 portant Code minier sy ny Décret n°2006-910 du 19 août 2006 portant application du Code minier. Mety hampigadra 1 hatramin’ny 5 taona, ary onitra 300 000Ar hatramin’ny 50 000 000Ar. Nahetsika ny Tompon'andraikitry ny harena ankibon'ny tany; notanana ny Tompon'entana sy ny mpamily hatao famotorana; nogiazana ireo vato; nampidirina ambala mandritry ny 10 andro ilay fiara. Natolotra ny fampanoavana omaly 28 desambra ireo olona voasabotra, araka ny tatitry ny mpitandro filaminana.
Festival DONIA andiany faha-27 Hanomezana asa, hampiroboroboana ny fizahantany
Tsy misy izay tsy niraviravy tanana indrindra fa ireo mpandraharaha taorian’ny nidiran’ny valan’aretina Covid 19 teto amintsika ka nampihitsoka tanteraka ireo asa fihariana maro isan-tsokajiny.
Fampiasam-bola 716 tapitrisa dolaran’ny BAD Homen-danja ny fitaterana, angovo, fambolena
Mahatratra 20 amin’izao fotoana izao ny asa vatsian’ny Banky Afrikanina momba ny fampandrosoana na ny BAD ho an’i Madagagasikara, izay misy fampiasam-bola 716 tapitrisa dolara eo. Mitsinjara toy izao izany :
Fanafarana sakafo Mandany 600 tapitrisa dolara isan-taona i Madagasikara
Tokony efa hihoatra ny dingana arahana mikasika ny fametrahana ny fahavitan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara izay resahan’ny fitondrana ankehitriny efa ho isan’andro, hoy ny mpanao politika,
Famatsiana solika Tsy hiasa eto Madagasikara intsony ny Galana ?
Nisy ny fampahalalam-baovao iray nilaza, fa efa hiroso amin’ny fijanonana tsy hiasa intsony ny orinasa mpamatsy solika Galana.
Fepetra fiarovana ny indostria madinika Nampidi-bola 24 miliara Ar ny ANMCC
Ny fiarovana ny indostria madinika sy salantsalany no ho laharam-pahamehan’ny ANMCC (Autorité Nationale Chargée des Mesures Correctives Commerciales) na ny Manam-pahefam-pirenena misahana ny fepetra fanitsiana ara-barotra amin’ny ho avy.